दोलखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कार्की निलम्बित ! - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
दोलखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कार्की निलम्बित !
आवाज संवाददाता ५ श्रावण २०७४, बिहीबार
दोलखा, ५ साउन
दोलखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुन्दर कार्की निलम्बित भएका छन् । दोलखा उद्योग वाणिज्य संघको विहीबार बसेको नियमित मासिक बैठकले अध्यक्ष कार्कीलाई निलम्बन गरी प्रथम उपाध्यक्ष दिनेश थापालाई कार्यबाहक अध्यक्ष बनाएको छ ।
अध्यक्ष कार्कीको अनुपस्थितिमा संघका प्रथम उपाध्यक्ष थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा अध्यक्ष कार्की, द्धितीय उपाध्यक्ष दिनेश बस्नेत, कार्यसमिति सदस्य बलराम थापा र सहदेव थापा अनुपस्थित थिए । सहदेव थापा भने बैठकको सूचना पाएर पनि आफ्नो व्यवहारिक कारणले काठमाडौं रहनु परेको भन्दै संघको बैठकले गरेको निर्णय आफूलाई मान्य हुने भन्दै महासचिवलाई सम्बोधन गरेर पत्र पठाएका थिए । संघमा १५ सदस्यीय कार्यसमिति रहेको छ ।
संघको अध्यक्षको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधिन भएकाले त्यो मुद्धाको किनारा नलागुन्जेलसम्मका लागि अध्यक्ष सुन्दर कार्कीलाई निलम्बन गरी आर्थिक अधिकार सहित दिनेश थापालाई कार्यबाहक तोकेको बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ । बैठकले एशोसिएट तर्फबाट राजेश उप्रेती, कृष्ण श्रेष्ठ र चक्र घतानेलाई सदस्य मनोनित गरेको छ ।
अध्यक्ष कार्कीले भने २ दिन अघि मात्र सुरेश उप्रेती र घनश्याम शिवाकोटीलाई सदस्य मनोनित गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका थिए । संघका महासचिव इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले संघका पदाधिकारी सदस्यहरु कसैलाई जानकारी नभई अध्यक्ष कार्कीले आफूखुशी रुपमा सदस्य मनोनित गरेको भन्ने सुनिन आएकाले त्यसलाई रद्द गरी संघको बहुमतका आधारमा नयाँ सदस्य मनोनित गरेको बताए ।
त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रको सहयोगमा सञ्चालित एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम र एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमको संयोजक श्याम खड्कालाई नियुक्त गरेको छ । यस अघि दुवै कार्यक्रमको संयोजक अध्यक्ष कार्की आफैं थिए । संघले एक गाउँ एक कार्यक्रम अन्र्तगत आलु र एक जिल्ला एक कार्यक्रम अन्र्तक्रत किबी खेतीलाई लिएको छ ।
भुकम्पले क्षति भएको संघको भवन तत्काल पुर्ननिर्माण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । भुकम्पनले आफ्नो भवनमा क्षति भएपछि संघको सचिवालय भाडामा सञ्चालन हुँदै आएको छ । प्राविधिक अध्ययन गराएर तत्कालै भवनको रेक्टोफिट गरिने कार्यबाहक अध्यक्ष दिनेश थापाले बताए ।
भवन पुर्ननिर्माणका लागि निवर्तमान अध्यक्ष रामेश्वर मानन्धरले एक लाखको चेक हस्तान्तरण गरेको छन् । त्यस्तै भवन पुर्ननिर्माणका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, महासंघका पूर्व अध्यक्ष र पदाधिकारीहरु लगायतका उद्यमी व्यवसायीहरुले प्रतिबद्धता गरे अनुसारको रकम लिने उनले बताए । नपुग रकम संघमा आवद्ध अन्य सदस्यहरुबाट समेत लिने उनले बताए ।
अध्यक्ष कार्कीले भने आफू साधारण सदस्यबाट निर्वाचित वैधानिक अध्यक्ष भएकाले कार्यसमितिले निलम्बन गर्ने र कार्यबाहक तोक्ने अधिकार नभएकाले आधिकारिक अध्यक्ष आफैं भएको प्रतिक्रिया दिए । आफूलाई निलम्बन गर्न विधान अनुसार साधारण सभाको २ तिहाइ सदस्य वा अदालतको परमादेश चाहिने बताए ।
संघको बैठक अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले बैठक बोलाउने अधिकार भएकाले अध्यक्षसँग परामर्श नगरी बोलाएको बैठक सूचनामार्फत स्थगित गरेको बताए । उनले अहिलेसम्म विधान अनुसार काम गरेको दाबी गरे । संघको २०७३ बैशाख ११ गते निर्वाचन हुँदा रामेश्वर मानन्धरलाई १ मतान्तरले पराजित गरेका थिए । त्यसपछि मानन्धरले पुनः मतदानको माग गर्दै दायर गरेको मुद्धा उच्च अदालत हुँदै अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।